သော်သော် – Hlataw.com
” ဘာဖြစ်နေတာလဲ … သဲရယ် … ပြောဆိုလည်း မပြောဘူး ” ” ဟူးးးးးး …… ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိပါဘူး …… သော်သော်ရယ် ” မနက်အစောကြီး ထကာ အချစ်တော် သော်တာထွန်း အိမ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဆုရတီ တယောက် သူစိမ်း ယောင်္ကျား တဦးအား ပယ်ပယ်နယ် နယ် အလိုးခံပြီး လူမှု့ရေး ဖေါက်ပြန် နေသည်ကို ပိုးရတီ အပြောရ ခက်နေ ရှာ၏။ ” ကဲ … ဒါဆိုလည်း …… ရေကူးမယ် … ထ …… အဝတ်စားလဲ ” သော်တာထွန်း စကားအဆုံး ၂ယောက်သား ရေကူး ဝတ်စုံ လေးများ လဲကာ တိုက်ကြီး၏ နောက်ဖေးဘက် ရေကူး ကန်နား လျှောက်လာခဲ့ကြသည်။ ရေးကူး ကန်ထဲ ဆင်း သော လှေကားမှ ဆင်းကာ ၂ယောက်သား အားရ ပါးရ ရေကူးနေကြ၏။ ခဏအကြာ ရေကူးကန် ဒေါင့်နားလေး ပိုးရတီမှာ ရေကန်နံရံအား ကျောမှီကာ ကန်ဘောင်ပေါ် လက်၂ဖက် တင်ရင်း လျှာလေး ထုတ်ကာ နူတ်ခမ်း လေး အားဝိုင်းပြနေသည်။ သော်တာထွန်းမှာ ပိုးရတီ မျက်နှာ လေး ကြည့်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုးကပ် လာရင်း ပေါင်တန်၂ဖက်အား ရေထဲမှ ဆွဲမြှောက်ပြီး ဖင်ကြီးအား ပင့်ကိုင်လိုက်၏။ ” အို့ …… သော်သော် ” ရေပေါ်ပေါင်တန် ၂ဖက် ပေါ်လာမှ ဆွဲဖြဲပြီး ပေါင်ဂွလေး ထဲ မျက်နှာအပ်ကာ ရေကူးဝတ်စုံ ဘောင်းဘီလေး ပေါ်မှ အဖုတ်လေးအား ဆွဲစုပ်ရင်း ဖင်အား ပြန်ပင့် ကိုင်ထား သည်။ ပိုးရတီမှာ ကန်ဘောင်အား တံတောင်ဆစ်၂ဖက် တင်ထောက် ထားရင်း မျက်လုံးလေး စင်းနေမိ၏။ ထိုစဉ် သော်တာထွန်းမှာ ပိုးရတီ၏ ဖင်ကြီးအား ဘယ်လက် ဖြင့် ထိန်းကာ ညာလက်မှ ရေကူးဝတ်စုံဘောင်းဘီဂွ လေးအား ပေါင်ခြံဘေး ဆွဲကပ် ပစ်တော့သည်။ ရေပေါ်တွင် စောက် မွှေး ပါးပါးလေး ကပ်နေသော ပိုးရတီ အဖုတ်လေး မှာ ဖေါင်းကြွနေပြီး ရေမျက်နှာ ပြင် မတည်ငြိမ်မှု့ကြောင့် စောက်စိလေးမှာ ရေပေါ် ပေါ်လာလိုက် မြုတ်သွားလိုက် ဖြစ်နေရ၏။
အစိလေး ပေါ်လာလိုက် သော်တာထွန်းမှ စောက်ပတ် အက်ကွဲကြောင်းအား လျှာထိပ်ဖြင့် ပင့်ယက်ရင်း ဆွဲစုပ် ပေးနေသည်။ ရေစိုစို စောက်ပတ်လေးအား အယက်ခံရင်း စောင်စိလေး သော်တာထွန်း ပါးစပ်ထဲ ရောက်စဉ် နွေးက နဲ့ ဖြစ်ပြီး အပြင်ပြန်ထုတ်ချိန် ရေနှင့် ထိတွေကာ အေးကနဲ့ ဖြစ်ကာ မတူညီသော ခံစားမှု့ ၂မျိုး တပြိုင်ထဲ ခံစား နေရ ပြန်၏။ သော်တာထွန်း တအားဆွဲစို့နေ သဖြင့် စောက်စိ လေးမှာ ရဲပြီး ကျိန်းစပ်လာပြီး စောက်ခေါင်းပေါက်မှ အရည်ကြည် များ ရေကူးကန်ထဲ စိမ့်ထွက်လာသည်။ ပိုးရတီ သွေးသား များ ဆူပွက်လာကာ အားကနဲ့ တချက် အော်ပြီး ရေပေါ် စောက်ရည်များ ကော့ပန်း ပစ်တော့၏။ သော်တာထွန်းမှာလည်း ပိုးရတီ ရေပေါ် ကော့ပျံနေပုံ အား ကြည့်ရင်း ရေထဲ၌ပင် အဖုတ်လေး အား ဘောင်းဘီ အပြင်မှ ဖိပွတ်ရင်း စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ၂ယောက်သား နူတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ကာ ခဏအကြာမှ ရေကူးကန်ထဲမှ ပြန်တက် လာရင်း ရေချိုးခန်း ဝင်ကာ ရေ ချိုးကြ၏။ထိုအဖြစ်ပျက်များအား ချောင်းနေသူမှာ သော်တာထွန်း တို့ အိမ်မှ တောက်တိုမယ်ရ ခိုင်းသော ဖိုးလုံးပင် ဖြစ်သည်။ သော်တာထွန်း ဖခင် မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်စဉ် ရွာမှ ငယ်သူငယ်ချင်း တဦး ၏ အကူညီတောင်းမှု့ကြောင့် လက်တိုလက်တောင်း ခိုင်းရန် နှင့် အိမ်တွင် အရေး အကြောင်း လူငယ် တယောက်ရှိရန် ခေါ်လာခဲ့သည်။ သော်တာထွန်း အထက် သားတယောက် ရှိသော် လည်း အိမ်မကပ်သဖြင့် အရေးအကြောင်း လူငယ် ဆိုလို့ ဖိုးလုံးသာ ရှိ၏။ တိုက်၏ တောင်ဘက် ကားဂို တောင် နောက်ကျောဘက် အခန်းလွတ်ထဲ ခြံစောင့် ဦးစံ မောင် နှင့် အတူ နေထိုင်ရ၏။
ရေကူးကန် အနောက်ဖက် ခြုံများ ရှင်းနေစဉ် သော်တာထွန်းနှင့် ပိုးရတီတို့ ရေလာကူး သဖြင့် အသံ ပေးပဲ ဝမ်းလျား မှောက်ကာ ချောင်းကြည့် တော့သည်။ ဖိုးလုံး တယောက် သော်တာထွန်းတို့ အိမ်အား ရောက်ရှိ နေသည်မှာ ၂နှစ်နီးပါ ရှိနေ၏။ ရွာမှာနေစဉ် ကတည်းက ရာဂစိတ် အားကြီးသူ ဖြစ်ရာ ဒီအိမ် ရောက်ပြီး ၂လ အကြာ အခွင့်ရေး ရလျင် ရသလို သော်တာထွန်းအား ချောင်းလေ့ ရှိသည်။ သို့သော် သော်တာထွန်းမှာ ယောင်္ကျားစိတ် ပေါက်ကာ ဒူးဖုံး ဘောင်းဘီတို များနှင့် အနေများ သဖြင့် မှန်းချက်နှင့် နမ်းထွက် မကိုက်ခဲ့ပေ။ ဒီတကြိမ်သာ ရှားရှား ပါးပါး ရေကူးဝတ်စုံ လေးနှင့် မြင်ခွင့် ရလိုက်၏။ သော်တာ ထွန်းတို့ အိမ်ထဲ ဝင်သွားသည်နှင့် ခြုံများအား ပြောင် အောင် ရှင်းကာ ပြီးစီးသည်နှင့် ဂိုဒေါင်နားမှ ရေကန် လေး ထဲ ရေချိုးကာ သူနှင့် ခြံစောင့် ဦးစံမောင် နေသော အခန်း ထဲ ဝင်လာခဲ့သည်။ ” ဖိုးလုံးလား … ဟုတ် … အဘစံ ” ” ခြုံတွေ ရှင်းပြီးရင် … အိမ်ကြီးထဲ … သွားလိုက်ဦး … ဆရာ ကတော် ခေါ်နေတယ် ” ” ဟုတ်ကဲ့ ” ဖိုးလုံး မျက်လုံးများ အရောင် တောက်လာတော့၏။အဝတ် စား အမြန်လဲကာ အိမ်မကြီး ဘေးမှ ပတ်ထွက် ရင်း အိမ် ရှေ့ပေါက်မှ ဝင်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရှေ့ အရောက် သော်တာ ထွန်းနှင့် ပိုးရတီတို့ ထွက်လာ နေသည်ကို မြင်လိုက်ရ၏။ ” ဖိုးလုံး … ခုန … နင် ဘယ်သွားနေတာလဲ … မာမီ ခေါ်နေတယ် ” ” နောက်ဖေး …… ဟို ဟို ” ” ကဲ … တော်ပြီ ……… အူကြောင်ကြောင်နဲ့ … မာမီ ဘာဝယ်ခိုင်းမလဲ …… မသိဘူး … သွားလိုက်ဦး ” ” ဟုတ် ” ” လာ … သဲ … သော်သော်တို့လည်း … ရုပ်ရှင် ဒိုးမယ် “သော်တာထွန်းမှာ ဖိုးလုံးအား ပြောရင်း ပိုးရတီအား တဆက်တည်း ပြောကာ ၂ယောက်သား ထွက်လာခဲ့ လိုက် ၏။ ” ဟင် …… သော်သော့် ကား …… ကိုကို ယူသွား ပြန်ပြီ … ထင်တယ် ” ” ကဲပါ … သော်သော်ရယ် … ပိုး ကားနဲ့ပဲ … သွားရအောင် … လက်မှတ် မမှီပဲ … နေမယ် ” ” တောက် …….သူ့ကားက .. ဘောလုံးပွဲ ရှုံးလို့ ပေါင်ထားတာ …… သဲ ရ ” ” သူ့ကားသူ ပေါင်တာပါ … သော်သော့် ကားတော့ … မလုပ်ရဲ လောက်ပါဘူး … သွားကြစို့ ” ၂ယောက်သား ပိုးရတီ ကားလေးဖြင့် ခြံဝန်းထဲမှ ထွက် လာကာ အိမ်ရှေ့ လမ်းမပေါ် ပုံမှန်လေး မောင်းရင်း လမ်းထိပ် လမ်းမကြီးပေါ် မေးတင်ကာ မြို့ထဲဘက် ဦးတည် လိုက်တော့သည်။
မီးပွိုင့် ၂ခု ဖြတ်ကျော် အပြီး ပိုးရတီ ကားလေး ညာဘက် နောက်ဘီး ပေါက်သဖြင့် လမ်းဘေး ထိုးရပ်လိုက်တော့သည်။ ” ဟူးးးး…… ဒီနေ့ ပြသဒါးပဲ …… သဲရယ် … သော်သော့်ကားက …… ကိုကို ယူသွားပြီ ……… သဲကားက ……… ဘီးပေါက် ပြန်တာ ” ” အင်း …… ကားဘီး ဖာဖို့ … ပိုး ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် … ခဏ စောင့် ” ပိုးရတီ အသိ လေထိုးကျွတ်ဖာ ဆိုင်အား ဖုံးဆက်ရာ ၁၀မိနစ် အကြာ ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားဘီးအား လာဖြုတ် ၍ မိနစ် ၂၀အကြာတွင် လာရောက် တပ်ဆင် ပေးသွား သည်။ ရုပ်ရှင် လက်မှတ် မမှီသဖြင့် မုန့်စား အအေး သောက်ကာ သော်တာထွန်း အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြ တော့၏။ အိမ်ပြန် ရောက်သည်နှင့် သော်တာထွန်းမှာ အိမ်အောက်ထပ် ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာ တွဲလျက် အခန်း ထဲ ဝင်ကာ သေးပေါက်ပြီး အဖုတ်လေးအား ဆေးကာ ဧည့်ခန်းဘက် ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဧည့်ခန်းထဲ အရောက် တီဗွီဖွင့်မည် အလုပ် အိမ်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်း အရှေ့ဘက်မှ အိပ်ခန်းရှေ့ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနှင့် ချောင်းကြည့်နေသော ပိုးရတီအား မြင်လိုက်သဖြင့် တီဗွီမဖွင့်ဖြစ်တော့ပဲ ပိုးရတီ နားလေး လျှောက်လာခဲ့၏။ထိုအိပ်ခန်းမှာ မိခင်နှင့် ဖခင်တို့၏ လင်မယား အိပ်ခန်းဖြစ်ရာ တံခါးဝမှ အတွင်းဘက် စိုက်ကြည့်နေသော ပိုးရတီ နောက်ကျောဘက်မှ ကပ်ကာ အတွင်းဘက် ကြည့်လိုက် မသည်။ မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ရှက်ခြင်း ဝမ်းနည်ုးခြင်း ယူကျိုးမရ ဖြစ်ခြင်းများ ခံစားမှု့ ပေါင်းစုံ ခံစား နေမိ တော့ ၏။ အိပ်ခန်းထဲ လူ၂ယောက် ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ် ပေ။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်သီတာမိုးမှာ ကိုယ်လုံး တီး အနေထား နှင့် ပက်လက်လှန်လှဲနေရာ ဖိုးလုံးမှာ စွပ်ကျယ် လက်ပြတ် ဖြင့် ဘေးမှာ ကိုယ်တစောင်း ခွရင်း ဒေါ်သီတာ မိုး နို့အုံတဖက် အား စို့ကာ လက်တဖက်က ပေါင်ကြားထဲ ပွတ်ပေးနေ၏။ ” ခုမှ … တခါ လိုးထားတာ … မဝသေးဘူးလား … ဖိုးလုံး ” ” အန်တီမိုး … စောက်ဖုတ်ကြီးက … မြင်တာနဲ့ … လိုးချင် စရာကြီး … လိုးရတာ အားမရဘူးဗျာ ” ” နင် … ကိုသန့်ဇင် တို့ရွာကတည်းက … ငါ့ကို ပစ်မှား နေတာ … ငါသိပါတယ် ” ” ဟုတ်တယ် … အန်တီမိုးရာ … အဲဒီညက … ကျနော် … ဂွင်းကို …… ၃ခါလောက် ထုပြီးမှ … အိပ်လို့ရတာ ” ဒေါ်သီတာမိုးမှာ အသက် ၄၇နှစ် ကျော်လာ သော်လည်း အသား ဖြူဖြူ နှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ် ပေါက်မှာ အချိုးကျစွာ ဆွဲဆောင်မှု့ ရှိနေသေးသည်။
ခင်ပွန်းသည် ဦးသန့်ဇင်မှာ အသက် ၅၀ကျော်နေပြီး လက်ရှိ အသက်အရွယ်ထိ တလ ၄ကြိမ်ခန့် ကာမ ဆက်ဆံသေး သော်လည်း နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင် ရေး သုခ မရှိသည့် ရက်တွေ များလာတော့၏။ တဖြည်းဖြည်း တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းနေသော ကာမမီး လေးအား လူမသိ သူမသိ အိမ်ထဲတွင် ငြိမ်းနေမိသည်။ ပက်လက်လှဲကာ ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် ပေါင်တန်၂ဖက် ဖြဲထား သဖြင့် ဖင်သားစိုင် ဘေးသားများကားထွက် နေပြီး ပေါင်ခြံကြားမှ စောက်ပတ်အုံကြီးမှာ ဖိုးလုံး လက်ဖြင့် ဖိပွတ်နေသဖြင့် ပြန်လည် ဖေါင်းကြွ လာတော့၏။ ဖိုးလုံး တယောက် နို့အုံ ၂ဖက်အား ခပ်ပြင်းပြင်း တချက်စီ ဆွဲစုပ် ကာ ထထိုင်ပြီး ဖင်ပြန် ခေါင်းပြန် အနေထား ပြန်လှဲကာ ဒေါ်သီတာမိုး ဖင်ကြီးအား မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွဲကပ် ပစ် သည်။ ပေါင်တဖက် ကွေးထောင်ပေးသော စောက်ပတ် အား ခေါင်းတိုး ယက်ရင်း ပေါင်ကြားထဲမှ လီးက ဖြောင်း ခနဲ့ ထောင်ထလာ၏။ ဒေါ်သီတာမိုး မှာလည်း ကိုယ်တ စောင်း အနေထားဖြင့် ဖိုးလုံး ပေါင်ကြားထဲ ထောင်မတ် နေသည့် လီးကို မက်မက် မောမော ဆွဲစုပ်တော့သည်။စောက်ပတ် အယက်ခံရင်း လီးစုပ်ရသည့် အရသာ အား ဖိုးလုံးနှင့် တွေ့မှ ခံစားတတ် လာခဲ့၏။ ခန္ဓကိုယ်နှစ်ခု ဘေးတစောင်း အနေထားဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ပူးကပ် ကာ ဖိုးလုံး လက်တဖက်က ဒေါ်သီတာမိုး ဖင်ကြီးအား ဆုပ်နယ်ရင်း အဖုတ်အား ယက်ပေးနေသလို ဒေါ်သီတာမိုး လက်တဖက်မှာ လည်း ဖိုးလုံး ပေါင်တန်အား ပွတ်သပ် ပေးကာ လီးကြီး အား တပြွတ်ပြွတ် စုပ်ပေးနေသည်။ လီးကြီးမှာ ဒေါ်သီတာမိုး ပါးစပ်ထဲ မဆန့်မပြဲ ဝင်ထွက် နေရင်း အကြောများ ထောင်လာရ၏။ ဖိုးလုံး လျှာစွမ်း အောက် ရောက်နေသော ဒေါ်သီတာမိုး အဖုတ် မှာ လည်း ဖေါင်းကြွနေပြီး အရည်ကြည်များ အိုင်နေတော့ သည်။ စောက်စိလေး အား ပါးစပ်ထဲ သွင်းပြီး လျှာ ထိပ်လေးဖြင့် ဖိထိုးဝိုက်ဆွဲ ပေးရာ ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် ပါးစပ်ထဲမှ လီးအား ထုတ်ကာ ဆက်မစုပ် နိုင်တော့ပဲ တအားအား ညည်းနေ ရှာ၏။ သူမ ခန္ဓကိုယ် တဆက် ဆက် တုန်ကာ ဖိုးလုံး မျက်နှာအား စောက်ပတ် ဖြင့် ဖိကပ် နေရ ပြန်သည်။ ” အားးးး ………အမလေးးး …….ဖိုးလုံးရယ် …..အ ……အ ……… ငါ ……… ငါ …….. မရတော့ဘူး……. ကျွတ်ကျွတ် ” ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် ညည်းနေရင်း ထထိုင်ကာ ဖိုးလုံး ကိုယ်လုံးအား ဆွဲလှန်ပြီး ထောင်မတ်နေသော လီးပေါ် ခွထိုင်ကာ တဘွတ်ဘွတ်ဖြင့် ဆောင့်လိုးတော့ ၏။
ဖြူဖွေး အိတွဲနေသော နို့အုံ၂ဖက် ရမ်းခါနေကာ မျက်စိမိတ်ရင်း ဖင်ကြီး မြှောက်လိုက် ချလိုက်နှင့် အချက် ၄၀ခန့် မနား တမ်း ဆောင့်ချရင်း စောက်ရည် များ ပန်းထုတ် နေတော့ သည်။ ” အ ……. အ ……. ကောင်းလိုက်တာ ……. အင်းဟင်း …….. ရှီးးးးး ရှီးးးး ” စောက်ရည်များ ညှစ်ထုတ်ရင်း လီးအား စောက်ခေါင်း အတွင်းသားများဖြင့် ညှစ်ကာ ခဏအကြာမှ ဘေးနား လှဲချကာ ပက်လက်လှန် အနားယူနေလိုက်၏။ အဖုတ် ထဲ မှ လီးကျွတ် သွားသည်နှင့် တဘူဘူ တဘင်ဘင် ဖြင့် စောက်ပတ်ထဲမှ လေအံသံများ ထွက်ပေါ် နေသည်။” အဟင့် ဟင့် ……… ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ …… သဲရယ် ” သော်တာထွန်း တယောက် မိခင်ဖြစ်သူ အိပ်ခန်းနားမှာ ခွာလာပြီး သူမ အိပ်ခန်းထဲ အရောက် ပိုးရတီအား ဖက်ကာ ငိုနေရှာသည်။ ” မငိုပါနဲ့ …… သော်သော်ရယ် ” ” မာမီ … လုပ်ရက်တယ်ဟာ …… ဒယ်ဒီ့ အပေါ်ကို ” ” အင်း …… ပိုး မာမီလည်း …… အတူတူပါပဲ …… သော်သော်ရယ် … မနေ့ညက … ဒယ်ဒီ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖေါက်ပြန်လို့ …… ပိုးလည်း စိတ်ရှုတ်ပြီး …မနက်လင်းလင်း ချင်း …… သော်သော် တို့အိမ် ထွက်လာ ခဲ့တာလေ ” ” ဟင် ” ” ဟုတ်တယ် … သော်သော် ” ပိုးရတီမှာလည်း သူမ မိခင် ဒေါက်တာ ဆုရတီနှင့် ဦးစိုင်း မောင်တို့ လိုးကြပုံများအား သော်တာထွန်း အား ပြန်လည် ပြောပြ လိုက်တော့၏။ ညနေစောင်း ပိုးရတီ ပြန်ကာနီး သော်တာထွန်းမှာ အိမ်ရှေ့ ကားနားထိ လိုက်ပို့ရန် ၂ယောက်သား အတူ ထွက်လာ ခဲ့၏။ ” ဟော … သမီး … ပိုး …… ပြန်တော့ မလို့လား ” ပိုးရတီတို့ ဧည့်ခန်းရှေ့ အဖြတ် အိပ်ခန်းထဲမှ ကွတကွတ ဖြင့် ထွက်လာသော ဒေါ်သီတာမိုးမှာ နွမ်းလျသော အသံ လေး ဖြင့် နူတ်ဆက် နေသည်။ ” ဟုတ် …… အန်တီမိုး ” ပိုးရတီမှာ ပြုံးပြရင်း ပြန်လည် နူတ်ဆက်သော်လည်း သော်တာထွန်းမှာ မိခင်ဖြစ်သူအား စိတ်ခုနေသဖြင့် ခပ်တည်တည်လေး ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ ပိုးရတီ ကားလေး ထွက်ခွာသွားမှ ခြံဝန်းတံခါးအား ပြန်စိကာ အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့၏။ ” သော်သော် …… မာမီ့ … ရေခဲသေတ္တာထဲက … ရေအေးတာလေး … တဘူးလောက် … ယူပေးဦး ” ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် နေ့လည်ကတည်းက ညနေထိ လစ်ဟာနေသော ကာမ စည်းစိမ်လေးအား ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံယူနေရာ စောက်ပတ် တအုံလုံး ကျိန်းစပ်နေပြီး ပေါင်ဂွ များ နာကျင်ကာ တကိုယ်လုံး ညှောင်းညာနေသည်။
သော်တာထွန်း ယူလာပေး သော ရေဗူးအား ဖန်ခွက်ထဲ အပြည့်ငှဲ့ကာ တဝက်ခန့် မော့သောက် ပစ်၏။ သမီး ဖြစ်သူ သော်တာထွန်း ထွက်သွားသည်နှင့် ဖိုးလုံးနှင့် ဖြစ်ပျက် ခဲ့သော အကြောင်းများအား ပြန်လည် စဉ်းစား နေမိသည်။” မိုး ………… ဘာတွေ တွေးနာတာလဲ ” ” ဟင် …… ကိုသန့်ဇင် … ခ်ခ် ခ်ခ် …… ဘာမှ မတွေးပါဘူး ” လင်တော်မောင် အနားရောက်လာသည်ကို သတိ မထားမိတော့။ ဖိုးလုံးနှင့် အဖြစ်ပျက် များအား ပြန်တွေး နေစဉ် သူမဘေး ဝင်ထိုင်ရင်း မေးနေသော ဦးသန့်ဇင်အား ရယ်မောကာ ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ” မျက်နှာလဲ နွမ်းနေပါလား … မိုးရယ် …… နေမကောင်း ဘူးလား ” ” ကောင်းပါတယ် … ကိုသန့်ဇင်ရဲ့ … နေ့ခင်းက အိပ်ပြီး အိပ်ယာ ထကာစမို့ပါ ” ” ကလေးတွေရော …… သမီးက ခုလေးပဲ …… အထဲ ဝင်သွားတာ …… သားလေးက ……… နေ့လည် ကတည်း က …… လည်နေတာ …… ခုထိ မလာ သေးဘူး ” ဦးသန့်ဇင်မှာ ဒေါ်သီတာမိုး စကားဆုံးသည်နှင့် အဝတ်စား လဲရန် ဧည့်ခန်းမှ ထ၍ အိပ်ခန်းဘက် ထွက်လာခဲ့သည်။ ” ထမင်း စားတော့မလား …… ကိုသန့်ဇင် ” ဦးသန့်ဇင် အိပ်ခန်းဝ အရောက် ဒေါ်သီတာမိုးမှ လှမ်းမေးနေ၏။ ” မစားသေးဘူး … သားပြန်လာမှ …… အတူ စားတော့မယ် ” သားသမီးများနှင့် မယားအပေါ် ခုထိ ချစ်ခင် ကြင်နာ တတ်သော ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးသန့်ဇင် ကျောပြင်အား ကြည့်ကာ ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် ပြုံးနေမိသည်။
” ဟာ …… မပြောပါနဲ့ …… ဘကြီးစံရယ် …… သော်သော် တောင်းပန်ပါတယ် …… အဟင့် ဟင့် ” ၁ လခန့် အကြာ ဒေါ်သီတာမိုး အိမ် အနောက် ကားဂိုဒေါင် နား အရောက် ကြားလိုက်ရသည့် အသံကြောင့် ခြေလှမ်း များ တုံ့ကနဲ့ ရပ်သွားရ၏။ ” ပြောမှ ဖြစ်တော့မှာ … သော်သော်ရဲ့ …… တော်ကြာ …… ဆရာက …… ဘကြီးစံ ကိုပါ …… သိရဲ့သားနဲ့ မပြောဘူး ဖြစ်နေမှာ ” ” ဘကြီးစံ …… ဒယ်ဒီကို …… ပြောလိုက်ရင် …… ဒယ်ဒီတို့ အိမ်ထောင်ရေး…… ပြိုကွဲပြီး …… သော်သော်တို့ ……… မိသားစု ….ကစဉ် ကလျား ဖြစ်ကုန်တော့မှာ ” ” ဖိုးလုံးလည်း …… လူလို နားမလည်းဘူး … သော်သော်ရယ် …….ကိုယ့် ကျေးဇူးရှင်ကိုမှ …… လုပ်ရက်တယ် … ဘကြီးစံ တွေ့နေတာ …… ၅ခါ လောက်ရှိပြီ ……… ဟူးးးး ” ခြံစောင့် ဦးစံမောင် စကားကြောင့် ဂိုဒေါင်နား ချောင်း နား ထောင်နေသော ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် ခေါင်းနဘမ်း ကြီးသွားရ၏။ သူမနှင့် ဖိုးလုံးတို့ ခိုးခိုး လိုးနေသည်ကို ဦးစံမောင်မှ မြင်တွေ့သွားပြီး သူမ ခင်ပွန်း ဦးသန့်ဇင်အား ဖွင့်ပြောရန် ပြောပြနေစဉ် သမီးဖြစ်သူ သော်တာထွန်းမှ တားနေသည်ကို သိရှိလိုက်ရသည်။ ဆက်နားမထောင်ရဲ တော့ပေ။ ခုလည်း ဖိုးလုံးအား ခေါ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲ အလိုးခံရန် စဉ်းစားရင်း နောက်ဖေးဘက် ထွက်လာရာ မမျှော် လင့်သော စကားများ ကြားလိုက်ရသဖြင့် အိမ်ဘက် ပြန်လာခဲ့တော့သည်။ အိမ်ထဲ ပြန်ရောက် လာသော် လည်း အယောင်ယောင် အမှားမှား ဖြင့် စိတ်နဲ့ကိုယ် မကပ်တော့ ပေ။ ခဏအကြာ သမီးဖြစ်သူ သော်တာထွန်း ဝင်လာစဉ် မျက်လုံးချင်း မဆုံမိအောင် သတိထား နေရသည်။ နောက် ရက်များတွင်လည်း ရင် တထိတ်ထိတ်နှင့် စိတ်ညှစ်နေရ ၏။ ခြံစောင့် ဦးစံမောင်များ လင်ဖြစ် သူအား တိုင်လိုက် မလား သမီးဖြစ်သူကများ အပြစ် ပြောလေ မလား အမျိုး မျိုး တွေးရင်း စိတ်ရှုတ်နေမိ သည်။ ဖိုးလုံးအား မရောတော့ ပဲ သမီးဖြစ်သူ သော်တာထွန်းအား အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့် နေကာ အခွင့်ရေးရလျင် သူမ ဖေါက်ပြန်မှု့ အတွက် တောင်းပန်ရန် စဉ်းစားထား၏။ ခြံစောင့် ဦးစံမောင် ကိုလည်း အသက်အရွယ် ကြီးလာသဖြင့် တိုးတိုး တိတ်တိတ် ပိုက်ဆံပေးကာ အလုပ်ထုတ်ဖို့ ထိ စီစဉ်နေသည်။
သို့သော် ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် သူမ အစီအစဉ်များအား အကောင်ထည် မဖေါ်ဖြစ် တော့ပေ။နောက်၁လ ခန့်အကြာ သူမ အပြင်မှ ပြန်လာပြီး ဧည့်ခန်းထဲ ခဏထိုင်ကာ အိမ်အတွင်းဘက် ဝင်လာစဉ် သမီးဖြစ်သူ သော်တာထွန်း အိပ်ခန်းမှ စကားသံ သဲ့သဲ့ ကြားရသဖြင့် မျက်မှောင်ကြုံ့သွား မိ၏။သူမ ပြန်လာစဉ် သမီးဖြစ်သူ၏ အချစ်တော် ပိုးရတီ၏ ကားလေး ခြံထဲ မတွေ့မိသဖြင့် ဘယ်သူနဲ့ စကားပြောနေလည်း စဉ်းစား ရင်း အိပ်ခန်းနား တိုးကပ်ကာ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ သည်။ုခြံစောင့်ဖြစ်သူ ဦးစံမောင် ပေါင်ကြားမှ လီးအား ကြည့်ရင်း ဒေါ်သီတာမိုး တစ်ယောက် မျက်လုံး ပြူးကာ ကြက်သီးများ ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ထလာရသည်။ ထိုချိန်သမီးဖြစ်သူ သော် တာထွန်း လက်တဖက်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ထားသော ဦးစံမောင် လီးအား ဆုပ်ကိုင်ရင်း လီးအရည်ပြားအား ဖြဲချလိုက်ပြန်၏။ ဦးစံမောင်၏ ကြီးမား တုတ်ခိုင်သော လီးကြောင့် ဒေါ်သီတာမိုးစိတ်လှုပ်ရှား နေမိသည်။ ဖိုးလုံး လီးထက် အနည်းငယ်တုတ်ကာ လီးထိပ်မှ ကော့တက် နေသော ဒစ်ကြီးအား ကြည့်ရင်း စောက်ပတ်ဝလေးထဲ တဆစ်ဆစ်ဖြင့် အရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက်လာ၏။ ” အင်းဟင်း …… တုတ်လိုက်ထဲ …ဟာကြီး …… ဘယ်ချိန် မြင်ရမြင်ရ ……… အားရလိုက်တာ ……… အဘစံရယ် …… ရွှတ် ရွှတ် ” သော်တာထွန်း တယောက် လီးအား တရွှတ် ရွှတ် နမ်းကာ ပါးပြင်ပေါ်တင်ပြီး ဖိကပ် ပွတ့်လှိမ့်ရင်း ခပ်တိုးတိုး ပြောဆိုနေပြန်သည်။ ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် ချောင်းကြည့်နေရင်း ခြံစောင့် ဦးစံမောင် မှာ သူမ ဖေါက်ပြန်သည့် ကိစ္စအား သမီးဖြစ်သူအား အကြပ်ကိုင်ပြီး လိုးလိုက် သည်ကို ချက်ချင်း ရိပ်မိ လိုက်၏။ သူမတို့ လင်မယား သမီးဖြစ်သူ သော်တာ ထွန်း၏ ယောင်္ကျားစိတ် ပျောက်ရန် နှစ်အတော်ကြာ ကြိုးစားခဲ့ဖူးသည် ဘယ်လိုမှ မရခဲ့ပေ။ ၁လ ထဲနှင့် သမီးဖြစ်သူ၏ ယောင်္ကျားစိတ်အား ဖျောက်ကာ လိုးနိုင်ခဲ့သော ဦးစံမောင်အား ဖြုံနေမိသည်။ သမီး ဖြစ်သူ၏ ကာမ အထိအတွေ့အား ကြည့်ရင်း ပထမ ဆုံး အကြိမ် မဟုတ်မှန်း သိရှိနေ၏။ ၁လ အတွင်း ဦးစံမောင် ဘယ်၂ကြိမ် လိုးထားမှန်း မခန့်မန်းနိုင်ပေ။ ” အင့်……. ပြွတ် …… ပြွတ် …….. အ …….. သော်သော်ရာ ….. ရှီးးးးးးး ” ဒေါ်သီတာမိုး ကြည့်နေစဉ် သော်တာထွန်းမှာ ဦးစံမောင် လီးထိပ်အား ခပ်ပြင်းပြင်း ဆွဲစုပ်လိုက် သဖြင့် တွဲကျနေ သော လဥ ၂လုံး မှာ ကျုံ့၍ အပေါ်ထိုးတက် သွားရှာ၏။ တဆက်ထဲ လီးအရည် ပြားအား ဆွဲဖြဲကာ လီးထိပ် အပေါက်အား လျှာ ထိပ်လေးနှင့် ဖိထိုးရာ ဦးစံမောင် တယောက် အသံ ထွက် ညည်းလိုက်ရပြန်သည်။
” အ …….အ ……. သော်သော် …….ရှီးးးး …….. ကျွတ် ” ဦးစံမောင်မှာ ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ် လာသော ကာမအရှိန် အား မထိန်းချုပ်နိုင်ပဲ သော်တာထွန်း ခေါင်းအား ဖမ်းကိုင် ကာ ကန်လန့် အနေထားဖြင့် ပါးစပ်ထဲ လီးအား ဖိထည့် ပစ်တော့၏။ ” အု …… ဝု …….ဖလု ……ဝူးးးး ……..ဖလူးးးး …..အဟွတ် ဟွတ် ” ပါးစပ်ထဲ လီးကြီး မဆန့်မပြဲ ဝင်သွားရာ ဒစ်ဖူးမှ အာခေါင် အပျောလေးအား ထိုးမိသဖြင့် သော်တာ ထွန်း တယောက် အသက်ရှူမှားကာ တဟွတ်ဟွတ် သီးနေရသည်။ ဦးစံ မောင် ရပ်မရတော့ပေ သော်တာ ထွန်း ခေါင်းအား စုံကိုင် ပြီး မနားတမ်း ဆွဲလိုးပစ်၏။ သော်တာထွန်း မျက်လုံးများ ပြူးထွက် လာကာ လည်ပင်ကြောများ ထောင်ပြီး ဦးစံမောင် ပေါင်ရင်း အား တွန်းရင်း ပါးစပ်ထဲမှ သွားရည် များနှင့် အကျိ အချွဲများ စီးကျလာတော့သည်။ မျက်ရည်များ လည်လာ ပြီး ခေါင်းအား နောက်ဆုတ် ရုန်းမှ ပါးစပ် ထဲက ဦးစံမောင် လီးကြီး ကျွတ်ထွက်လာကာ တဆက်ဆက် ရမ်းခါနေ၏။ ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် သမီးဖြစ်သူ၏ နူတ်ခမ်းဖူးဖူး လေးအား ခြံစောင့် ဦးစံမောင် မှ ဇွတ်ဆွဲလိုးနေ သည်ကို ကြည့်ရင်း ရာဂစိတ် တဝက် သနားစိတ် တဝက်ဖြင့် ခံစားမှု့ ရှုတ်ထွေး နေတော့သည်။ သူမ ဖေါက်ပြန်မှု့ အတွက် တန်ဆာခံ ဖြစ်သွားရှာသော သမီးဖြစ်သူအား ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲ ဝမ်းနည်းစိတ်က နေရာယူလာ ပြန်၏။ ” ဖွီးးးး …..အု … ဝူးးး ……… ဖလူးးး ……….တအား ကြမ်းတာပဲ ……… အဘစံရယ် ” သော်တာထွန်း တယောက် နူတ်ခမ်းထောင့်မှ ယိုကျ လာသော အရည်များအား လက်ခုံဖြင့် သုတ်ကာ မျက်လုံး ပင့်ကြည့် ရင်း ပြောဆိုနေသည်။ ” ရှီးးးးး …… ကျွတ် ….. ကောင်းလွန်းလို့ပါ ……. သော်သော် ရာ ……. ထပြီး …… လေးဘက် ကုန်းလိုက် ” ဦးစံမောင်မှာ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ပေါ့ပါး ဖျက်လတ်နေကာ သော်တာထွန်း ပါး၂ဖက်အား ဘယ်ပြန် ညာပြန် နမ်းပြီး နို့အုံအား ညှစ်ရင်း ချော့ပြော လိုက်၏။
” အရင် တခါလို …… ကြာကြာလေး လိုးပေး နော် …… ဟွန့် ” သော်တာထွန်းမှာလည်း ခပ်နွဲ့နွဲ့လေး ပြောရင်း ထထိုင်ပြီး လေးဘက်ကုန်း ပေးနေသည်။ ဖင်သားစိုင် ၂ခြမ်း အလယ်မှ စောက်ပတ်လေးမှာ ပန်းရောင်သန်း ကာ ဖေါင်း ကြွနေပြီး အရည်ကြည်များ စောက်ခေါင်းဝ အိုင်နေရှာ ၏။ မျက်စိရှေ့ လေးဖက်ကုန်းပြီး ဖင်ထောင် ထားသော သော်တာထွန်း စောင်ပတ်လေး အား ကြည့်ကာ ဦးစံမောင် လီးကြီး ပေါက်ကွဲမတတ် တင်းမာနေရင်း တဆက်ဆက် တုန်ခါ နေရသည်။ ဖင်၂ခြမ်း လက်ဖြင့် ဖြဲကာ ဖင်ပေါက် နီညို လေးအား ၅ချက် ၆ချက်ခန့် လျှာ အပြားလိုက် ဖိယက်ပြီးမှ လီးထိပ်အား စောက်ခေါင်းဝ တေ့ကာ အရင်း ထိ ပစ်ဆောင့် လိုက်တော့၏။ ” အ ……… အမေ့ …….. ကျွတ်ကျွတ် …………… ရှီးးးးး ” ချောင်းကြည့်နေသော ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် သူမ မွေးထုတ် ထားသော သမီးဖြစ်သူ စောက်ပတ်လေးထဲ လီးကြီး မဆန့်မပြဲ ဝင်သွားရာ တကိုယ်လုံး ဆက်ကနဲ့ တုန်ပြီး စောက်ပတ်လေး ထဲမှ စောက်ရည်များ စီးကျ လာသည်။ မြင်ကွင်းအား အကြည့်မရွေ့ပဲ ဆက်ကြည့် နေရာ သော်တာထွန်း ဖင်ကြီး တွန့်ကနဲ့ ဖြစ်ကာ လက်၂ဖက်မှာ အိပ်ယာခင်းအား ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ကိုင် နေသည်ကို မြင်နေရ၏။ ဦးစံမောင်မှာ လီးတဆုံး ထဲ့ပြီး ထပ်မလိုးပဲ ခါးအားဖြင့် ဝိုက်ကာ စောက်ခေါင်းထဲ လီးဖြင့် မွှေပေး လိုက်ပြန်သည်။ ” ဟူးးးး ……. ရှီးးးးးး ….. အမျိုးမျိုးပါပဲ …….အဘစံ ရယ် …….တတ်လဲ တတ်နိုင်ပါတယ် ……. ကောင်းလိုက်တာ …… အ …..အားးးး …………… အားးးးး ” ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် သမီးဖြစ်သူ အသဲခိုက် အောင် ကောင်းနေပုံအား ကြည့်ရင်း ထမိန်အပြင်မှ ပေါင်ကြားထဲ လက်သွင်းကာ စောက်ပတ် အုံလေး အား ဖိပွတ်နေမိသည်။
အစိလေး ထိမိသည် နှင့် ခဏအကြာ ဒေါ်သီတာမိုး အံလေးကြိတ်ကာ ခပ်တိုးတိုး ညည်းရင်း ထမိန်ထဲ၌ပင် စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ပစ်၏။ ” ရှီးးးးးးး …… အ ……အ……. ကျွတ် ကျွတ် ……..အမလေးးးးး ……. ဆောင့်လိုးပါ ………အဘစံ ရဲ့ ………အဟင့် ဟင့် ” ဦးစံမောင် ဒစ်ကြီးက စောက်ခေါင်း အတွင်းသား နုနု လေးများအား ချိတ်မွှေနေသဖြင့် သော်တာထွန်း ဖင်ကြီး ရမ်းခါနေရင်း အားမလို အားမရ ဖြစ်ကာ ဇွတ် ဆောင့် လိုးခိုင်းနေတော့သည်။ သမီးဖြစ်သူ၏ ကာမ စိတ် တောက်လောင်နေပုံအား ကြည့်ရင်း ဒေါ်သီတာ မိုး မှာလည်း လိုက်ပါ ခံစား နေမိ၏။ ထိုချိန် ဦးစံမောင် မှာ သော်တာထွန်း ခါးလေးအား မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်ကာ မီးပွင့် မတတ် ဆောင့်လိုးနေ၏။ သော်တာထွန်း တယောက် လေးဖက်ထောက် အနေထားဖြင့် ခေါင်းလေး မော့တက် လာကာ ထိထိမိမိ လိုးချက် များအား အားရ ကျေနပ်စွာ ခံယူနေ၏။ အားထည့် လိုးရင်း ဦးစမောင် ဘယ်လက်မှာ ဘယ်ဘက်ပေါင် ရှေ့ခြမ်း လက်ကွေးသွင်းကာ စောက်စိ လေးအား ချေပေးလိုက်ပြန်သည်။ လက်တစ်ဖက်က စောက်စိလေးအား ချေကာ လီး အရင်း ထိ ကပ်သွားအောင် ဆောင့်လိုးနေသဖြင့် သော်တာထွန်း တယောက် ပတ်ဝန်းကျင်အား မေ့ကာ သတိလက်လွတ် နှင့် အသံထွက် ညည်းနေတော့ သည်။ သော်တာထွန်း ညည်းသံလေး ဆူညံလာသဖြင့် ဦးစံမောင်မှာ စောက်ပတ် လေးအား ဆက်မလိုးသေးပဲ လီးအား အပြင် ထုတ်ကာ ဖင်ဝ နီတာရဲလေးအား ဒစ်ဖူးဖြင့် တေ့ပြီး ဝိုက်ပေးနေ၏။ ” အိုးးး ….. အဟင့် ……..ဖင်…….ဖင်ကို …… မလုပ်နဲ့ နော် …… နာတယ် ” ဖင်ဝ လေးအား လီးထိပ်ဖြင့် ပွတ်ပေးနေရာ ကာမ စည်းစိမ် လေး ထူးကဲနေသော်လည်း သော်တာထွန်း တယောက် ဖင်လိုးခံရမှာ ကြောက်နေရှာ၏။ ဦးစံမောင် အရင် တခေါက် သော်တာထွန်း အား လေးဖက်ကုန်း ခိုင်းပြီး နောက်မှ စောက်ပတ်လေးအား ဆွဲလိုးရာ လီးမှာ အတော်တဆ ကျွတ်ထွက်ပြီး ပြန်လိုး စဉ် ဖင်ဝလေးထဲ ဒစ်ကြီး မြုတ်သွားတော့သည်။
သော်တာထွန်း ငယ်သံ ပါအောင် အော်ကာ ဘေးနား လှဲချပစ်ရင်း အတော်ကြာမှ စောက်ပတ်လေးအား အလိုး ပြန်ခံနေ၏။ ခုလည်း ဖင်ဝလေးအား လီးထိပ် ဖြင့် ဖိမွှေရင်း ဘယ်လက်က စောက်စိလေးအား ညှစ်ချေပေးရာ သော်တာထွန်း ဖင်ကြီး အထက် အောက် ရမ်းခါရင်း စောင်ခေါင်းပေါက်ထဲ လီးဝင်ရန် အမြန် ကြိုးစားနေရှာသည်။ ” ရှီးးးးးးး …… အင်း ……. ကျွတ်………ကျွတ် ……………အို့ ” ဖင်ကြီး ဆက်ကနဲ့ ဆက်ကနဲ့ ကော့ကာ လီးထိပ်အား စမ်းကြည့်ရင်း စောက်ခေါင်းဝနား တေ့မိသည်နှင့် နောက်ပြန် ပစ်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့၏။ အ အား …… အင့် …….. ဘွတ် ဘွတ် ” မြင်ကွင်းကြောင့် ဒေါ်သီတာမိုးမှာလည်း ဒုတိယ အကြိမ် ကာမသွေးများ ဆူပွက်လာပြန်သည်။ သမီး ဖြစ်သူ၏ ခါးသေးကျဉ် လေးအောက် ကော့ထွက် နေသော ဖင်သား စိုင်၂ခြမ်းမှာ ဦးစံမောင် ပေါင်တန် များနှင့် ဆောင့်မိကာ တုန်ခါနေရင်း တဘတ်ဘတ်နှင့် ဆူညံနေ၏။ စောက်ရည် များ ပြန်အိုင်လာသဖြင့် ထမိန်အပြင်မှ အဖုတ်အား ပွတ်သုတ် နေစဉ် ဖင်ကြား ထဲ ခပ်နွေးနွေး အရာတခု လာထောက်သဖြင့် ထိတ်လန့်ကာ လှည့်ကြည့် မိသည်။ ” အေမ့ ………… အု ………… ဖလု ” လန့်အော်မိစဉ် ပါးစပ်အား ပိတ်ခံရသဖြင့် အသံ ဆက်မ ထွက် နိုင်တော့ပေ။ ” ကျနော်ပါ ……… အန်တီမိုး ရယ် ” အသံနိမ့်ကာ ခပ်တိုးတိုး ပြောနေသော ဖိုးလုံးအား တွေ့ လိုက်ရတော့၏။ အဖုတ်ထဲ အရည်များရွှဲနေစဉ် ဖင်ကြားအား လီးနင့် အထောက် ခံရသဖြင့် စောက်ခေါင်းဝ ထိန်း ထားသော အရည်ကြည်များ ပေါင်ခြံမှ ခြေမျက်စိထိ စီးကျ လာပြန်သည်။ ဖိုးလုံး မျက်လုံးကလည်း အရောင်တောက် ကာ ပုဆိုးထဲမှ လီးကလည်း ဆက်ကနဲ့ ဆက်ကနဲ့ ခုံးထ နေ၏။ ” လာဟာ … ဖိုးလုံး ” ဒေါ်သီတာမိုး ကာမစိတ်များ တောက်လောင် နေချိန်မို့ ဖိုးလုံးအား သူမတို့ လင်မယား အိပ်ခန်းထဲ ခပ်မြန်မြန် လေး ဆွဲခေါ်လာသည်။ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် ဟန်မဆောင် နိုင်တော့ပေ ဖိုးလုံးအား ပက်လက်လှန် လှဲခိုင်းကာ ပုဆိုး ခါးပုံစအား ဆွဲချွတ်ပစ်၏။ ပေါင်ကြား ထဲ တဆက်ဆက် တုန်ကာ အပေါ်သို့ လန်တက်နေ သော ဒစ်ကြီးအား အငမ်းမရ ဆွဲစုပ်တော့သည်။ ဖိုးလုံးမှာလည်း နောက်ဖေးဘက် အမှိုက်ရှင်းကာ အိမ်ရှေ့ထွက်လာပြီး ပန်း အိုးများ ရေလောင်းနေစဉ် သမီးဖြစ်သူ အိပ်ခန်းအား ချောင်းနေသော ဒေါ်သီတာ မိုးအား တွေ့လိုက်ရသဖြင့် အသာလေး ဝင်လာခဲ့၏။
မြင်ကွင်းကြောင့် လီးတောင်လာ ပြီး ဒေါ်သီတာမိုး နောက်ကျောမှ ချောင်းရင်း လီးဖြင့် ထောက်မိကာ အိပ်ခန်း ထဲ ပါလာခဲ့ရသည်။ ဒေါ်သီတာမိုးမှာလည်း ရမ္မက်စိတ် ထကြွနေချိန်မို့ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထပြီး ပြဲလန်နေသည့် ဒစ်အား တပြွတ်ပြွတ် စုပ်ရင်း အပေါ်မှ ခွလိုးတော့၏။ ကြာကြာ မလိုးနိုင်တော့ပေ ကာမ အရှိန် များနေသဖြင့် အချက်၄၀ခန့် မနားတမ်း ဆောင့်ရင်း စောက်ရည်များ ပန်းထွက်လာသည်။ ” အ ………အားးးးး …….. မ ရ တော့ ဘူး …. ထွက် …..အားး …….. ထွက် ပြီ … ဟာ ” ပါးစပ်က ညည်းရင်း စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ရာ ဖိုးလုံး လဥ၂လုံး ကြားမှ တဆင့် အိပ်ယာခင်းပေါ် စီးကျကာ ရွှဲနှစ် ကုန်တော့၏။ ခဏ အမောဖြေပြီးမှ ဘေးနား ပက်လက် လှဲနေသော ဖိုးလုံး လီးအား ထထိုင်ရင်း လက်ဖဝါးဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ စောက်ရည်များ ရွှဲကာ မပျော့မမာ ဖြစ်နေသောလီးအား ၁၀ချက်ခန့် ထုပေးပြီး လီးထိပ်အား ကုန်းစုပ်ပေးလိုက် သည်။ ဖိုးလုံးမှာ ဒေါ်သီတာမို့ လုပ်သမျှ အသာ ငြိမ်ခံ ကာ ကာမ စည်းစိမ် လေး ခံယူနေ၏။ ဒေါ်သီတာမိုး ခေါင်းလေး မြင့်လိုက် နိမ့်လိုက်ဖြင့် အရှိန်မြန်လာချိန် ဖိုးလုံး ဖင်မှာ အိပ်ယာ ပေါ်မှ ကြွတက်လာပြီး အံကြိတ် သံ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ” အာ ….. အ ….. ရှီးးးးးးးး ….. ကျွတ် ” အံကြိတ်သံ အဆုံး လီးထိပ် အပေါက်မှ လရည်များ ဒေါ်သီတာမိုး ပါးစပ်ထဲ ဗျစ်ကနဲ့ တဖျောဖျော ဝင်ကုန် တော့၏။ ဒေါ်သီတာမိုး တယောက် လီးအား ပါးစပ် ထဲမှ မထုတ်ပဲ ဝင်လာသမျှ လရည်များအား မျိုချ ပစ်နေသည်။ လရည်များ ကုန်စင်သည် အထိ လီးထိပ် အား အရသာခံ စုပ်ရင်း ခဏအကြာမှ ထုတ်ပေးလိုက် တော့၏။ ” အားဟား ……. ကောင်းလိုက်တာ … အန်တီမိုးရယ် …. ရှီးးးးးးး …….. ရှီးးးးးးးး ” ဖိုးလုံး မှာ မျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ပဲ ညည်းနေရှာသည်။
ထိုချိန် သော်တာထွန်းမှာလည်း ဦးစံမောင်၏ ထိထိမိမိ လိုးချက်များအောက် မျော့နေ အောင် ခံနေရရှာသည်။ ဦးစံမောင်၏ ဆောင့်ချက်များမှာ အရွယ်နှင့် မလိုက် အောင် ပြင်းထန်နေ၏။ သော်တာထွန်း ကုတင်တစ်ခု လုံး လှုပ်ရမ်း နေသလို ပါးစပ်မှ ညည်းသံ လေးများ တချက် တချက် စူးကနဲ့ ထွက်ပေါ်လာရသည်။ သော်တာထွန်း ပြီးသွား သည်နှင့် ဦးစံမောင်လည်း အချက် ၃၀ခန့် မနားတမ်း ဆွဲလိုးရင်း လရည်များ စောက်ပတ် လေးထဲ ပန်းထည့် ပစ်တော့၏။ ” ကောင်းလိုက်တာ …… သော်သော်ရယ် ” ပြောပြီးသည်နှင့် ဦးစံမောင်မှာ လီးအား ဆွဲထုတ်ရင်း အဝတ်စားများ ပြန်ဝတ်နေသည်။ သော်တာထွန်းမှာ ကုတင်ပေါ် ခပ်ကွေးကွေး လှဲချကာ အသက်မျှင်း ရှုနေရ ၏။ ” ညကြ …… တခါ ထပ်လိုးဦးမယ် နော် …… သော်သော် …… တံခါး ပိတ်မထားနဲ့ ” ဦးစံမောင် နောက်ဖေး ပေါက်မှ ထွက်သွားချိန် သော်တာ ထွန်းမှာ ခွေခွေလေး ကျန်နေရစ်သည်။ ခြေရင်း ဘက်ရှိ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးနှင့် စောက်ပတ် လေးအား သုတ်ကာ ပြန်မှေး နေတော့ သည်။ ဟိုလိမ့် ဒီလိမ့်ဖြင့် သူမ အဖြစ်ပျက်များအား ပြန်စဉ်းစား နေမိ၏….ပြီးပါပြီ။